UTim Cook akekho ohlwini lwama-CEO akhokhelwa kakhulu | Ngivela kwa-mac
UTim Cook akekho ohlwini lwama-CEO akhokhelwa kakhulu
I-Apple iyinkampani ebaluleke kunazo zonke emhlabeni, kepha uma kukhulunywa ngokukhokha ama-CEO, UTim Cook akekho ngokusobala ohlwini lwakamuva lwama-CEO akhokhelwa kakhulu ayi-200 E-USA. Ocwaningweni olwenziwe yi 'I-New York Times', isinxephezelo esimaphakathi sezikhulu eziphezulu ngo-2015, empeleni kwehle ngo-15% ngo-2015 kuze kufinyelele kufayela le- $ 19,3 million isilinganiso uma usebenza enkampanini okungenani $ 1 billion emalini engenayo yonyaka. UCook ukhokhise okungaphezulu kakhulu kwalokho phambilini, kodwa kulo nyaka akasinciphisi lesi silinganiso.
Ucwaningo luthole ukuthi ngokokuqala ngqa kusukela ngo-2011, ayikho i-CEO eyayike yaqoqa imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 100, ngeholo eliphakeme kakhulu onalo UDara Khosrowshahi wase-Expedia, lapho i- $ 94,6 million ngonyaka owedlule ULeslie Moonves ovela ku-CBS uthole indawo yesibili yize ikhokhiswe cishe amaRandi ayizigidi ezingama-40.
Yize engabonakali ngokuqinile ohlwini kulo nyaka, uCook ube neminyaka yokuba ngumholi ophambili. Ku- 2012 ubeyisikhulu esiphezulu esikhokhelwa kakhulu ezweni, ewina $ 94 million ngonyaka wokuqala. Awukwazi ukukhokhelwa ngaleyo ndlela minyaka yonke, kepha iyakwazi ukwenza uhlu olungu-100 lwesikhathi esiphambili.
Ucwaningo belugxile kuphela kulokho okwenziwe ngabaphathi be-CEO, kepha uma ungeza kwabanye abaphathi, njengabanye bethusi eliphambili le-Apple, Angela Ahrendts ube nomholo we $ 73 million ngonyaka wakhe wokuqala e-Apple, ngenkathi abanye abaphathi bethanda U-Eddy Cue, uJeff Williams noPhil Schiller unqobe ngaphezu kwe- $ 20 million eminye iminyaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » UTim Cook akekho ohlwini lwama-CEO akhokhelwa kakhulu
Izinsuku ezi-3 noTim Cook: lena yi-CEO ye-Apple
Ukubuyekezwa kokuma kwe-HiRise iMac kusuka ku-Twelve South